AH: September 2011
၂၀၁၂ ကမ္ဘာကြီးပျက်သွားတာ ငါ့တူရှုက ဖန်သာပြင်ကြီးရှေ့မှာ
ဂျူးလိယက်ဆီဇာ ကို ဘရူးတပ်စ်က ဓားနဲ့ထိုးတော့
ကလီယို ပက်ထရာက တစ်ခစ်ခစ် ရယ်ခဲ့လား (၀ါ) ငိုခဲ့လား
ဂျူလိယက်မှ အဆိပ်သောက်မသေရင် ရှိတ်စပီးယားက
ခြင်္သေ့နှစ်ကောင် ထိခတ်လိုက်လို့ “ရွှပ်” ခနဲ့ အသံထွက်ရင်
ဒီမှာ အမိ နင်အမတန် ပလီလွန်းလှတယ်
by A.H (၃၀၊ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၁၁ ၁၀း၀၀)
Posted by Aung Htut at 9/30/2011 10:01:00 PM 11 comments
Posted by Aung Htut at 9/30/2011 06:03:00 PM5comments
သို့မေမေ (သို့) အပြစ်မဲ့တဲ့ ရင်သွေးငယ်လေးတွေကို မဖျက်ဆီးကြပါနဲ့
ကျွန်တော်ဟာ မေမေရဲ့ရင်သွေးလေးပါ။ မေမေကတော့ သိဦးမှာမဟုတ်ပါဘူးလေ၊ ကျွန်တော့်အသက်က ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်လေးပဲ ရှိသေးတာကိုးမေမေရဲ့။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတာကို ရှာဖွေဦးမှာပါ မေမေ၊ သား မေမေ့ကို ကတိပေးပါတယ်။ သားမေ့မေ့ကို တစ်ခုလောက်တော့ပြောပါရစေ။ သားမှာ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ မျက်ခုံးမွှေးလေးတွေ ရှိလာမှာ မေမေရဲ့ နောက်ပြီးတော့ ဆံပင်အနက်ရောင်ကလေးနဲ့ပေ့ါ။ ဒါတွေဟာ အခုတော့ သားမှာ မရှိသေးပါဘူးလေ၊ သားမွေးလာတဲ့အခါကျရင်တော့ မေမေ မြင်ရမှာပေါ့။ သားဟာ မေမေ့ရဲ့ ပထမဦးဆုံး သားဦးရတနာလေးဖြစ်လာမှာလေ မေမေရဲ့။ မေမေက သားကို “မေမေ့ သားလေး” လို့ခေါ်မှာလားဟင်။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ ကူညီဖေးမရတော့မှာပေါ့နော်။ သားက သားကြီးလာရင် ဆရာဝန်ကြီး ဖြစ်ချင်တာ မေမေရဲ့။
Posted by Aung Htut at 9/30/2011 12:30:00 PM7comments
နယူးဂျာစီပြည်နယ် ရဲမှုး က ဥပဒေရဲ့ အထက်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိပါဘူး၊ ကျွန်တော့် မိန်းမ အပါအ၀င်ပေါ့လေ လို့ ဆိုသွားပါတယ်။
ရဲ့မှုးကြီး ဗင်းဆင့်ကရူးဆိုး ရဲ့ မိန်းမဟာ သူတို့ရဲ့ ငါးနှစ်သား သားငယ်လေးကို ကျောင်းသွားအပို့မှာ ယာဉ်နှစ်ထပ် ရပ်နားပြီး ကလေးကို ဆင်းစေခဲ့လို့ ရဲ့မှုးကြီးက ဒဏ်ရိုက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ခရူးဆိုးက The record newspaper (http://bit.ly/pksv9y) ကို ပြောသွားတာကတော့ သူဟာ သူ့ဇနီးဖြစ်သောငြားလည်း ရဲ့မှုးကြီးရဲ့မိန်းမဆိုတဲ့ အရှိန်အ၀ါနဲ့ အခွင့်ထူးယူမှာကို မလိုချင်ဘူးလို့ ဆိုသွားသတဲ့။ ဒီအတွက် ရဲမှုးကြီးဟာ ၅၄ ဒေါ်လာ ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ ရဲမှု့ကြီးရဲ့ ဇနီး ပေါ်လာ ကရူးဆိုး အတွက် အပထမဆုံးအကြိမ်တော့ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်တုန်းကလည်း လမ်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်နေတုန်း သူမ မေ့ပြီးတော့ ကားကို မရွှေ့မိလို့ ဒဏ်ငွေဆောင်ရပြီးပါပြီ။
ရဲမှုးကြီးကတော့ သတင်းစာကို ပြောသွားရာမှာ သူဟာ သူရဲ့ ဇနီးကို ချစ်ပါတယ်။ သူမိန်းမဟာ တစ်ကယ်တော့ သူ့မိသားစုရှိ ကလေး ၄ ယောက်နဲ့ကားမောင်းတဲ့အခါမှာ တော်တော်လေးကို အလုပ်ရှုပ်နေတတ်ပါတယ် လို့ ဆိုသွားပါတယ်။
သူ့ဇနီး ကတော့ ဒီသတင်းကို ထင်မြင်ချက်ပေးဖို့ ဆက်သွယ်လို့မရပါခဲ့ပါဘူးတဲ့။
Posted by Aung Htut at 9/30/2011 10:03:00 AM0comments
ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသာပတေးနေ့တုန်းက အမေရိကန် ဒေါ်လာနဲ့ တွက်ရင် ၁သိန်း ၃သောင်း ၁ထောင်လောက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဂျပန် ယန်းငွေ ၁၀ သန်းကို အမည်မသိအလှုရှင်တစ်ယောက်က ဆူနာမီနှင့် ငလျှင်ဒဏ်ခံစားရသူတွေကို ရည်စူးကာ လှုဒါန်းသွားတယ်လို့ တာဝန်ရှိသူတွေက ဆိုပါတယ်။
စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့က ဂျပန်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ဆာကာဒိုးမြို့ကလေးရဲ့ အများသုံးအိမ်သာထဲမှာ ပလက်စတစ်ဈေးဝယ်အိတ်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ ဂျပန်ယန်းငွေ ၁၀ သန်းကို တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မြို့ကလူတွေကတော့ အကယ်လို့သာ ဒီငွေတွေကို ပိုင်ရှင်က သုံးလအတွင်းပြန်လာမယူဘူးဆိုရင် ဂျပန် ကြက်ခြေနီကို လှုဒါန်းမယ်လို့ မြိုကလေးရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မဆုမိ ဆက်ကီကူချိ ကဆိုပါတယ်။
သူမအဆိုအရတော့ ဒီငွေအိတ်လေးထဲမှာ လက်ရေးနှင့်ရေးသားထားသော စာကလေးတစ်စောင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး အဲ့ဒီစာလေးထဲမှာရေးထားတာက “ကျွန်တော်/ကျွန်မဟာ အထီးကျန်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ အနာဂါတ်ဆိုတာလည်း မရှိတော့ပါဘူး။ ဒီတော့ ဟော့ဒီငွေတွေကို တိုကိုဟု မှာရှိတဲ့ လူတွေ အသုံးချနိုင်အောင် ပေးလိုက်ပါ” လို့ ရေးထားပါသတဲ့။
Posted by Aung Htut at 9/29/2011 07:46:00 PM5comments
ဒီတစ်ခါတော့စကိတ်စီးမယ့် တရုတ်ရဲမေများ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ရေလွှာလျှောစီးမယ့် ပါပီတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန် ကာလီဖိုးနီးယားပြည်မှာရှိတဲ့ Huntington Beach (ဟန်တင်တန် ကမ်းခြေ) မှာ တတိယအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် ခွေးများ ရေလွှာလျှောစီးပြိုင်ပွဲ ကျင်းပတုန်းက ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေလို့ဆိုပါတယ်။ ခွေးအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ရေလွှာလျှောဘုတ် ၄မျိုးရှိပါသတဲ့။ ခွေးသေးသေးလေးတွေ ပေါင် ၂၀ လောက်ကနေပြီးတော့ ခွေးအကြီးကြီးတွေ ပေါင် ၆၀လောက်အထိ ၀င်ပြိုင်ကြပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေကတော့ အင်တာနက်မှကူးယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 9/29/2011 12:38:00 PM 8 comments
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် စိတ်ရှုတ်နေရင် ဦးနှောက်ဆေးဖို့ပေါ့........
ဘားတစ်ခုတွင်ဖြစ်သည်။ လူတစ်ယောက်ဝင်လာပြီး ဘားတွင်းထိုင်လိုက်ပြီး ဘားကောင်တာရှိ လူကိုလှမ်းပြောလိုက်သည်။
လူကြီး။ ။ဟေ့ ပြသနာမတက်ခင် ငါ့ကို ဘီယာတစ်ခွက်မြန်မြန်ပေးစမ်း
ဘားကောင်တာမှ လူလည်း ထိုသူပြောသည်ကို အူကြောင်ကြောင်နှင့် ဘီယာတစ်ခွက် လှမ်းပေးလိုက်သည်။ နောက်ထပ် ၁၅မိနစ်အကြာ
ဘားကောင်တာမှ လူလည်း အနည်းငယ် စိတ်ရှုပ်သွားသည်။ သို့သော် နောက်ထပ် ဘီယာတစ်ခွက် လှမ်းပေးလိုက်သည်။
တစ်ညလုံး ထိုလူကြီး သည် ထိုအတိုင်းဘီယာမှာသောက်နေသည်။ ၁၅ ခွက်မြောက်ကျတော့ ကောင်တာသမားက နားမလည်စွာဖြင့် ထိုလူကြီးကိုမေးသည် “ပြသနာမတက်ခင် ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။ နောက်တစ်ခုက ခုသောက်သောက်နေတဲ့ ဘီယာဖိုးတွေကို ဘယ်တော့ရှင်းမှာလဲ ခင်ဗျ”
လူကြီး။ ။ကဲကြည့်၊ အခု ပြသနာစပြီ
Posted by Aung Htut at 9/29/2011 11:11:00 AM 1 comments
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး။ သူများတွေတင်တာအားကျလို့ လျှောက်ရိုက်ပြီးတင်ကြည့်တာ။ အခု သစ်ကြားသီးတွေ၊ ဗာဒံစေ့လို့ခေါ်လား Almond စေ့လို့ခေါ်လား အဲ့ဒီအစေ့တွေ စပေါ်စဆိုတော့ လမ်းဘေးကနေ၀ယ်လာတယ်။
ဟော့ဒါက သစ်ကြားသီးတွေ ပုံရောင်းနေတာ အလည်က အခွံနွှာပြီးသား
Posted by Aung Htut at 9/28/2011 06:25:00 PM7comments
မနေ့က ရှန်ဟိုင်းမြို့လည်နားမှာ ရထား ၂ စီးတိုက်မိလို့ လူ ၂၇၀ ကျော်ဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပါတယ်။ အယောက် ၂၀ ကတော့ စိုးရိမ်ဖွယ် အခြေအနေရှိပါတယ်။ တရုတ်ပြည်ရဲ့ အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ရထားဆက်သွယ်ရေးအပေါ်ကို ပြည်သူတွေ မကျေမနပ် ဒေါသထွက်နေကြပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ လလောက်ကလဲ ရထားနှစ်စီး ခေါင်းခြင်းဆိုင်တိုက်လို့ လူ ၄၀ လောက် မြေကြီးထဲရောက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။
ဒီရထားတိုက်မှု့ကတော့ ရှန်ဟိုင်း မြို့လည် ခရီးသွားတွေ လည်ပတ်လေ့ရှိတဲ့ ယုယွမ်ပန်းခြံ ရထားဘူတာရုံနားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နိုင်ငံပိုင် သတင်းဋ္ဌာနတွေကတော့ ဒီတိုက်ခိုက်မှု့မဖြစ်ခင်မှာ Signal ပေးပို့မှုတွေ ချို့ယွင်းခဲ့ပြီး ရထားမောင်းသမားက တယ်လီဖုန်းနှင့်တစ်ဆင့် ရထားကို ဖြေးဖြေးလေးဘဲ မောင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ (သြော်… ဒါကြောင့်လည်း တိုက်မိတာ မဆန်းပါဘူး)
Posted by Aung Htut at 9/28/2011 03:22:00 PM4comments
Posted by Aung Htut at 9/28/2011 12:10:00 PM0comments
ငလျှင်လှုပ်၊ မြေပြို ပိတ်မိနေထဲကြားထဲက ၁ လကျော်ကြာ ရုန်းကန်ခဲ့တဲ့ ၀က်
၂၀၀၈ ခုနှစ်တုန်းက တရုတ်က စီချွမ်မှာ အင်းအား ရစ်ချက်တာစကေး ၈ လောက်ရှိတဲ့ ငလျှင်လှုပ်တော့ လူပေါင်း ၉ သောင်းလောက် သေဆုံးခဲ့တာကို မှတ်မိမှာပေါ့။ ဒါဟာ သူတို့ နေထိုင်ခဲ့တဲ သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ အပြင်းထန်ဆုံးသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ် တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဝက်ကတော့ ထူးထူးခြားခြား ပြိုကျ ပျက်စီးနေတဲ့ အပျက်အစီးတွေကြားထဲမှာ ရက်ပေါင်း ၃၆ ရက်လောက် ပိတ်မိနေရင်းနဲ့ကို အသက်ရှင်လျှက်ပြန်ထွက်လာနိုင်ပါသတဲ့။ ဒီဝက်ရဲ့ နာမည်က ကျူးကျန်းကျင်း လို့ခေါ်ပါသတဲ့။ ဘာသာပြန်လိုက်ရင် Storng-willed (မျှော်လင့်ချက်တွေကို ပြင်းပြစွာ ဆုပ်ကိုင်သူ လို့ဘဲဘာသာပြန်မလား ထားလိုက်ပါတော့) အဲ့ဒီလို ၀က်ကို နာမည်ပေးထားပါတယ်။ ဒီဝက်ဟာ မြေပိနေတုန်း မီးသွေးနှင့် ကျလာတဲ့ရေတွေကို စားသောက်ရင်း အသက်ဆက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 9/28/2011 09:34:00 AM0comments
Posted by Aung Htut at 9/27/2011 09:24:00 PM5comments
Posted by Aung Htut at 9/27/2011 04:25:00 PM5comments
Posted by Aung Htut at 9/27/2011 12:40:00 PM 1 comments
Posted by Aung Htut at 9/26/2011 10:09:00 PM2comments
Mymains Stewart Gilligan (Stewie လို့အတိုကောက်ခေါ်တဲ့) ကြောင့်ကြီးဟာ သူနာမည်နှင့် လိုက်အောင်ကို အလျှားရှည်လို့ ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးကြောင်အဖြစ် ဂင်းနစ်မှတ်တမ်း ၂၀၁၂ မှာ ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အဆိုပါကြောင်ကြီးဟာ ၂၈.၅ လက်မ (၁၂၃ စင်တီမီတာ) ရှည်လျှားပါသတဲ့။
သူ့သခင် ရောဘင် ဟန်ဒရစ်ဆန် ပြေပြချက်အရတော့ “ဒီကြောင်ကြီးကို စမွေးတုံးက ပုံမှန် ကြောင်တစ်ကောင်အရွယ်ပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့ ဒီလောက်ကြီးပြီးရှည်လာသလဲဆိုတာကိုတော့ မသိပါဘူး” လို့ ဂင်းနစ် ကမ္ဘာ့စံချိန်မှတ်တမ်း အဖွဲ့ကြီးကို ပြောပြသွားပါတယ် အောက်က YouTube မှာတော့ ဒီကြောင်ကြီး ဘယ်လောက်ရှည်သလဲဆိုတာကိုသာ ကြည့်ကြပါတော့။
Posted by Aung Htut at 9/26/2011 12:53:00 PM7comments
ပါးစပ်ကို အ၀တ်နှင့်စည်း၊ ဓားတစ်လက်ကိုရင်မှာစိုက်၊ သွေးအလိမ်းလိမ်းနှင့် ဒီဓာတ်ပုံကိုကြည့်ရင် ဒီသူငယ်မလေးဟာ ရက်ရက်စက်စက် ကို အသတ်ခံထားရတယ်လို့ ထင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဖြစ်မှန်ကတော့ ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီမိန်းကလေးရဲ့နာမည်က အိုင်ရန်နီဒက်စ် အာရူဂျို (Iranildes Araujo) လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းလေးကဒီလိုခင်ဗျ - မာရီယာ စီမိုး (Maria Simoes) လို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီးဟာ သူယောင်္ကျားနှင့် အာရူဂျိုတစ်ယောက် တိတ်တိတ်ပုန်းခုတ်နေတယ်လို့ ထင်တဲ့အတွက် ကားလို့စ် ဒီ ဂျီးဆက်စ်(Carlos de Jesus) ကို ငွေ ၃၄၅ ပေါင် ပေးပြီး သတ်ခိုင်းပါသတဲ့။ ဒီသကောင့်သား ကားလိုစ့်ဟာ အာရူရိုကို သတ်ဖို့အသွား တွေ့တွေ့ခြင်း မေတ္တာသက်ဝင် ချစ်ခင်သွားပါသတဲ့။ ဒါနဲ့ပဲ အသွားစေခိုင်းသူ မာရီယာ၊ ယူထားတဲ့ပိုက်ဆံ ၃၄၅ ပေါင်နှင့် သတ်မည့် ဂျိုးဆက်သည် လံကျုပ် လူသတ်မှု့ကြီးကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး မာရီယာ အလုပ်ရှင် မာရီယာကို သတ်ပြီးကြောင်း အစီရင်ခံလိုက်တော်မူပါသတဲ့။
အာရူဂျိုပြောပုံအရတော့ “ကျွန်မ၀တ်ထားတဲ့ အကျီင်္ကို ဖြဲ၊ နံဘေးမှာ ဓားတစ်ချောင်းစိုက်၊ ကားလိုစ့်က ကျွန်မကို ကြိုးချည်ပေး၊ နောက်တော့ ငရုပ်ဆီ (ခရမ်းချဉ်သီး အချဉ်ရည်) တွေနှင့် သုတ်ပြီးတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တာလေ”
ဒါပေမယ့် ၃ ရက်အကြာ မှာ မာရီယာဟာ ထိုလံကျုပ်စုံတွဲနှစ်ယောက် အနမ်းချွေနေကြတာကို လက်ပူးလက်ကြပ်မိပါသတဲ့။ ဒါနဲ့ဘဲ မကျေမနပ်ဖြစ်ပြီးတော့ ရဲစခန်းကိုသွား သူမပိုက်ဆံကို ပြန်လိုချင်တယ်ဆိုပြီး အမှု့ဖွင့်ပါသတဲ့။
ဘရာဇီးရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ အဆိုအရ ကားလိုစ့်နှင့် အာဂျူရိုတို့ အတွဲကို ငွေလိမ်လည်မှု့နှင့်တရားစွဲဆိုထားပြီး မာရီယာကိုတော့ လူသတ်ရန် ညွှန်းကြားမှု့ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
သြော်… ကမ္ဘာကြီးလည်း ပျက်စီးလာလိုက်တာ လူတွေလည်း အရူးတွေဖြစ်ဖြစ်လာပါလားနော်။
Posted by Aung Htut at 9/25/2011 01:04:00 PM4comments
နည်းပညာတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ လေတပ်များအတွက် နိုင်ငံများရဲ့ အသုံးစရိတ်တွေဟာလည်း မြင့်တက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ကာကွယ်ရေးအတွက် ပိုမိုအစွမ်းထက်သည်ထက် ထက်မြက်လာစေရန် စစ်သုံးနည်းပညာများဟာလည်း တိုးတက်ခဲ့၊ တိုးတက်ဆဲပါဘဲ။ တစ်ချို့လူတွေက လိုအပ်တယ်လို့ယူဆပေမယ့် တစ်ချို့တွေကတော့ အစိုးရရဲ့ငွေကြေးတွေကို ဖြန်းတီးမှု့သာဖြစ်တယ်လို့ ယူဆကြပြန်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ အောက်ပါ ဈေးအကြီးဆုံး တိုက်လေယာဉ် ၁၀ စီးကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁၀။ F/A-18 Hornet
F/A – 18 ဟာ မြေပြင်၊ ဝေဟင် နှစ်မျိုးစလုံးကို တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ တိုက်လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောများပေါ်မှာလည်း တင်ဆောင်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဒီလေယဉ်ကို အမေရိကန် ရေတပ်နှင့် ကမ်းရိုးတမ်း/ပင်လယ် လုံခြုံရေးအတွက် ထုတ်လုပ်ခဲ့တာပါ။ လောလောဆယ်မှာတော့ ကနေဒါ၊ သြစတြေးလျ၊ ဖင်လန်၊ ကူဝိတ်၊ မလေးရှား၊ ကူဝိတ်နှင့် ဆွတ်ဇလန် နိုင်ငံတွေမှာ အသုံးပြုနေကြပါတယ်။ ၁၉၈၆ ခုနှစ်ထဲက ဒီလေယဉ်အမျိုးအစားဟာ Blue Angels တွေအတွက် သရုပ်ပြ တိုက်လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
လေယာဉ်တစ်စီးရဲ့ ကုန်ကျငွေကတော့ US ၉၄ သန်း ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 9/25/2011 12:47:00 AM2comments
Irish pensioner 'died of spontaneous human combustion' - လူတွေဟာ အလိုအလျှောက်မီးလောင်ကျွမ်းပြီး သေဆုံးနိုင်ပါသလား?
တာရာမင်းဝေရဲ့ အရှေ့ဘက်မြို့ရိုးမှာ မိုးတွေရွာနေသည် ၀တ္တုကို ဖတ်ဖူးပါသလား။ အဲ့ဒီအထဲမှာ ကချေသည်ကလေးဟာ နောက်ဆုံး မိမိကိုယ်ကို လောင်ကျွမ်းစေတဲ့ ပြကွက်နဲ့ အသုံးတော်ခံပြီး သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါမျိုးတွေကို အပြင်လောကမှာရေ တွေ့မြင်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါသလား။
ဒီသတင်းကတော့ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံက အသက် ၇၆နှစ်အရွယ်ရှိ မိုက်ကယ် ဖဟာတီ လို့ခေါ်တဲ့ လူတစ်ဦးဟာ မည်သည် ပြင်ပမှ မီးလောင်ကျွမ်းမှု့မှ မရှိဘဲ ကိုယ်တိုင် မီးလောင်ကျွမ်းကာ သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သူဟာ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ ဂေါဝေးရှိ သူ့အိမ်ရှေ့ခန်းမှာ မီးလောင်ကျွမ်းပြီး သေဆုံးသွားခဲ့တာပါ။ သူ့ကိုယ်မှတစ်ပါး အခြားသော ပစ္စည်း ပစ္စယာတွေကို မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့ စုံစမ်းသူတွေက ဆိုပါတယ်။
ဂေါဝေးမှာ နေထိုင်တဲ့ ဒေါက်တာ ကီရာရင် မက် လော့လင်း (Dr. Kieran McLoughlin) ရဲ့အဆိုအရကတော့ သူဆရာဝန်လုပ်သက် ၂၅နှစ်အတွင်း ဒီလိုမျိုး အလိုအလျှောက် ရုတ်တရက် လူတစ်ဦးရဲ့ကိုယ်မှနေ ရုတ်တရက်မီးလောင်ကျွမ်းတာမျိုးကို မတွေ့ဘူးပါဘူးတဲ့။ ဒါဟာ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံမှာတော့ ပထမဆုံး အဖြစ်အပျက်လို့ ယုံကြည့်ပါတယ်တဲ့။
Posted by Aung Htut at 9/24/2011 05:30:00 PM4comments
Wat Rong Khun (၀က်ရောင်ခွန် လို့ အသံထွက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်) - ဒီကျောင်းဆောင်ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချိုင်းရိုင် (Chiang Rai) မှာတည်ရှိပြီးတော့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ကျောင်းဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားချက်ကတော့ ဒီကျောင်းဆောင်ဟာ အဖြူရောင် တစ်မျိုးတည်းနှင့်ဘဲ တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး မှန်များနှင့်ပါ ရောစပ်တည်ဆောက်ထားခြင်းပါတယ်။ ဒီကျောင်းဆောင်ဟာ ဆောက်လုပ်ဆဲ ကျောင်းဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ဒီဇိုင်နာ Chalermchai Kositpipat ဆိုသူက ၁၉၉၇ မှာ စတင်တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 9/24/2011 01:33:00 PM0comments
ဒါကတော့ Jason Erdkamp ဆိုသူက ကားမောင်းနေရင် သက်တန့်ရဲ့ အစွန်းတစ်ဘက်ကို တွေ့လို့ iPhoneနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ ကာလီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်၊ အော်ရိန့် ကောင်တီက အဝေးပြေးလမ်းမကြီး နံပါတ် ၂၄၁ ကနေ ကားနဲ့ဖြတ်သွားတုန်း တွေ့လို့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်က ရိုက်ယူထားတယ်လိုကဆိုပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 9/23/2011 04:52:00 PM 8 comments
ကျွန်တော် သမိုင်းအကြောင်းကို နားလည်းမလည်သလို သိလည်း တိတိကျကျ ဘာမှမသိပါဘူး။ ဒါလေးကို ရေးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ အချိန်ကျတော့ ဒီလောက်လေးတော့ ဖတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အသိစိတ်ကလေးနဲ့ ဖတ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော် ပေးချင်တဲ့ အရာလေးတစ်ခုကို ပေးဖို့ဘဲ ရည်ရွယ်တာပါပဲ။ ဒါလေးကတော့ စုစည်းညီညာမှု့ တစ်ခုကို ပြချင်လို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဘာကို သင်ခန်းစာယူပြီးတော့၊ ဘယ်လို ဆက်လုပ်ကြမလဲ? ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရတာလည်း? ဘယ်သူကြောင့် ဘယ်ဝါ့ကြောင့်ကို အတိတ်မှာ ထားခဲ့ပြီးတော့ ယခု ပစ္စုပ္ပန်မှာ ဘာတွေ လုပ်ကြမလဲ? ဘယ်လို ရှေ့ဆက်ကြမလဲ ဆိုတာလေးကို ကျွန်တော်ပြောချင်လို့ပါ။ အနစ်နာခံခဲ့သူတွေ၊ ကျဆုံးခဲ့တဲ့လူတွေ၊ အယူအဆ ကွဲပြားချက်တွေ၊ မိမိတို့ ကောင်းမယ်လို့ယုံကြည့်တဲ့ အရာတွေကို တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့လူတွေ၊ တည်ဆောက်နေဆဲလူတွေ၊ အားလုံးအတွက် ဒါတွေကိုရည်ရွယ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်တစ်ခုကတော့ လှပတဲ့ သက်တံတစ်ခု ကောင်းကင်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ အရောင် ၇ ရောင်နဲ့ ပေါင်းစပ်ရပါတယ်။ အနီရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်၊ အ၀ါရောင်၊ အစိမ်းရောင်၊ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင် စတဲ့ အရောင် ခုနှစ်ရောင်ပါ။ ဒီအရောင်တွေ အားလုံးကို ပေါင်းစပ်လိုက်ရင် အဖြူရောင် ဆိုတဲ့ မိခင်အရောင်ကြီးကို ပြန်ရမှာပါ။ ဒါတွေကို မပေါင်းစပ်နိုင်သရွှေ့ကတော့ ကောင်းကင်မှ လှပတဲ့ သက်တံကြီးကို မြင်ခွင့်ရဦးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Posted by Aung Htut at 9/23/2011 02:00:00 PM0comments
Face-Off ဇာတ်ကားကို ကြည့်ဖူးကြမှာပါ။ အဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ နီကိုးလပ်စ် ကေ့ဂ်ျဆိုတဲ့ မင်းသားနဲ့ စတင်ရင်းနှီးခဲ့ကြတာပါ။ ခုသတင်းလေးကတော့ ဒီလိုပါ။ အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေချိန်ကာလတုန်းက ရိုက်ထားခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံလေးဟာ နီကိုးလပ်စ် ကေ့ဂ်ျနဲ့ ချွတ်စွပ်တူနေလို့ပါတဲ့။ ဒါနဲ့ဘဲ ဒီမင်းသားဟာ လူစင်စင် မဟုတ်တန်ရာ သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်သာ ဖြစ်လေ၏ လို့ ဆိုပါလေသတဲ့။
ဒီသတင်းကို စတင်ဖွတဲ့လူကတော့ Jack Mord လို့ခေါ်တဲ့ ရှေးဟောင်းပစ္စည်း ရောင်းတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလူဟာ ebay လို့ခေါ်တဲ့ အွန်လိုင်း ရှော့ပင် ၀ဘ်ဆိုဒ်ကနေပြီးတော့ ၁၈၇၀ ၀န်းကျင်က ဘရစ်စတိုမှာ ရိုက်ထားတယ်ဆိုတဲ့ ဓာတ်ပုံကို ရောင်းဖို့တင်ပြီးတော့ ဒီပုံဟာ နီကိုးလပ်စ် ကေ့ဂ်ျ အစစ်မှ စစ်စစ် ရေမရောဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 9/22/2011 05:09:00 PM3comments
ချန်ဂီ ဂျူတီ ဖရီးမှာ ဖြတ်တိုင်း ငမ်းနေကျ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂ သိန်းခွဲတန် Dalmore စကော့ဝီစကီ ပုလင်းကတော့ စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့က ကြိုတင် ဘွတ်ကင်နဲ့ ကိုရွှေတရုတ် လက်ထဲကို ပါသွားပါပြီ။ ဒီ ၆၂ နှစ်သား ၀ီစကီဟာ အလွန်ရှားပါးတဲ့ ၀ီစကီဖြစ်ပါတယ်။ Changi Airport Group (CAG) ကပြောရေးဆိုခွင့်ရတဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့အဆိုအရကတော့ အသက် ၄၀ ၀န်းကျင် တရုတ်စီးပွားရေသမားတစ်ယောက်က ဘွတ်ကင် ၁ သိန်း ထားခဲ့ပြီးတော့ ဒီပုလင်းကို မှာယူသွားကြောင်းဆိုပါသတဲ့။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ဒီလို ၀ီစကီ ၁၂ ပုလင်းသာ ရှိတယ်လို့ အဲ့ဒီပြောရေးဆိုခွင့်ရ တန် ဆိုတဲ့ လူကဆိုပါသတဲ့။ အင်း… ဘယ်နားပိုက်ဆံထားရမှန်းမသိတဲ့လူတွေကတော့ ဒါမျိုးအရည်တွေ ၀ယ်ပြီး သောက်ကြမှာပေါ့လေ။
Posted by Aung Htut at 9/21/2011 08:52:00 PM 8 comments
Posted by Aung Htut at 9/21/2011 01:50:00 PM7comments
ဒါကတော့ ဂျက်ကီချန်းရဲ့ ကမ္ဘာပတ်မယ် ရက်၆၀ မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ၁ မိနစ်အတွင်း ပတ်ကြည့်တာပါ။ ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာ တောင်ဘက်ပိုင်းကနေ အမေရိကတိုက်ကို ဖြတ်သန်းပြီး အန္တာတိကတိုက်နား နေထွက်လာခါနီးအထိ ရိုက်ထားတဲ့ ၁ မိနစ်စာ ဗီဒီယိုလေးပါ။ ဒီ ဗီဒီယိုလေးကို James Drake ဆိုသူက ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီ တစ်မိနစ်စာ ဗီဒီယိုကလေးရဖို့အတွက် နိုင်ငံတစ်ကာ အာကာသစခန်းမှ ဓာတ်ပုံပေါင်း ၆၀၀ ကျော်နဲ့ ဖန်တီးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်ကမှ တင်ခဲ့တဲ့ ဒီ ဗီဒီယိုလေးကို YouTube မှာ ကြည့်ရှု့သူပေါင်း ၂ သန်း ၆ သိန်းကျော်ရှိသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နေထိုင်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီး တစ်ပတ် အမြန်ဆုံး ခရီးသွားချင်သူတွေ ကြည့်ပါလို့ ညွှန်းလိုက်ပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 9/21/2011 12:44:00 AM5comments
ဒါကတော့ အိုစမာ ဘင်လာဒင်နေတဲ့ အိမ်ကို အမေရိကန် အထူးကွန်မန်ဒိုတွေ ၀င်စီးတဲ့ ဗီဒီယိုပါ။ အမေရိကန်က မှတ်တမ်းအဖြစ် ထုတ်ဝေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့ကတော့ ဟော့ဒီ လင့် လေးကို နှိပ်ပြီး Torrent ကနေတစ်ဆင် ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။ အောက်ကပုံလေးတွေကတော့ အမြည်းအဖြစ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 9/20/2011 03:13:00 PM3comments
ဘား တစ်ခုတွင်ဖြစ်သည်။ လူငယ်လေးတစ်ယောက်သည် သူ၏ အရက်ခွက်ကို တွေတွေကြီးစိုက်ကြည့်နေသည်။ ထိုသို့ကြည့်နေသည်မှာ နာရီဝက်လောက်ကြာသွားပြီဖြစ်သည်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကားဒရိုင်ဘာတစ်ယောက် လူငယ်လေးဘေးနားဝင်ထိုင်ပြီးတော့ အဆိုပါလူငယ်လေးရဲ့ ခွက်ကို မော့ပစ်လိုက်ပါတယ်။ လူငယ်လေးက ဒရိုင်ဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုပါလေရော။
ဒရိုင်ဘာ။ ။ “မငိုပါနဲ့ သူငယ်ရယ် ငါကမင်းကိုစတာပါ ရော့အဲ့ဒီမှာ အသစ်တစ်ခွက်၊ ယောင်္ကျားကြီး တန်မယ့် ငိုစရာလားကွ”
Posted by Aung Htut at 9/19/2011 08:23:00 PM 1 comments
တစ်ခါတုန်းက မြို့ကြီးတစ်မြို့မှာ ကျောက်မျက်ပညာကို တစ်ဖက်ကမ်းခပ်အောင် တက်မြောက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာကြီးရှိပါသတဲ့။ တစ်နေ့တော့ ထိုဆရာကြီးဆီကို လူငယ်လေးတစ်ယောက်ကလာပြီးတော့ ပညာသင်ခွင့်တောင်ခံပါသတဲ့။ ဆရာကြီးက သူငယ်ကလေးကို ကြည့်ပြီးတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွယ် ဒီပညာသင်ဖို့ရာ စိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ်ကွဲ့။ သူငယ်လေးကလည်း လေးလေးနက်နက်ကို စိတ်ရှည်စွာနဲ့ ပညာသင်ယူဖို့ ကတိပြုပါသတဲ့။ ကောင်းပြီး ဒါဆိုရင်တော့ မနက်ဖြန်လာခဲ့ပါ။
ဒီလိုနဲ့ ရက်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်လာသည့်တိုင်အောင် သူငယ်လေးဟာ မနက်တိုင်း ကျောက်စိမ်း အရိုင်းတုံးလေးတွေကိုသာ ကိုင်ရင်းနဲ့ ကုန်လွန်လာခဲ့ပါသတဲ့။ တစ်နေ့တော့ ဆရာကြီးဟာ သူငယ်လေးဆီကိုလာပြီးတော့ သူ့ကို တစ်ခုခုကို ကိုင်ခိုင်းဖို့ လက်ယက်ခေါ်ပါသတဲ့။ သူငယ်လေးဟာ စိတ်မပါတစ်ပါနဲ့ဘဲ ဆရာကြီးဆီကို လာပါသတဲ့။ ဆရာကြီးဟာ ကျောက်အရိုင်းတစ်တုံးကို သူငယ်လေးလက်ထဲကို ထည့်ပေးလိုက်ပါသတဲ့။ အဲ့ဒီမှာ လူငယ်လေးက “ဆရာကြီး ဒါက ကျောက်စိမ်းတုံးနဲ့ မတူဘူး”။
Posted by Aung Htut at 9/19/2011 01:12:00 PM3comments
Posted by Aung Htut at 9/18/2011 01:35:00 PM2comments
ရှင်ခဏခဏဆိုနေကျ သီချင်းထဲကလို“ ဘဝသံသရာ…..”
Posted by Aung Htut at 9/18/2011 12:35:00 PM0comments
ကန်က စီးပွားရေး နလန်ထူဖို့...
ကြွေးဆပ်ဖို့ အသည်းအသန် လုံးနေတယ်...
Posted by Aung Htut at 9/17/2011 01:34:00 PM3comments
အာဒမ်တစ်ယောက် ဧဒင်ဥယာဉ်ကြီးထဲမှာ ပျင်းရိစွာ လမ်းလျှောက်နေပါသတဲ့။ အဲ့ဒါနဲ့ ဘုရားသခင်က အာဒမ်ကို မေးပါတယ်
ဘုရား သခင် ။ ။ သင်ဘာဖြစ်နေတာလဲ အဒမ်
အာဒမ် ။ ။ ကျွန်တော့်မှာ စကားပြောစရာ လူလည်းမရှိဘူး။ အလွန်ပျင်းဖို့ကောင်းပါတယ်
ဘုရားသခင် ။ ။ ကောင်းပြီ။ ငါ မင်းကို အဖော်ပြုဖို့ မိန်းမတစ်ယောက်ကို ဖန်ဆင်းပေးတော်မူမယ်။ ဒီမိန်းမဟာ မင်းစားသောက်ဖို့ ချက်ပြုတ်ကျွေးလိမ့်မယ်၊ မင်း ၀တ်ထားတဲ့ အ၀တ်တွေကို လျှော်ပေးလိမ့်မယ်၊ မင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသမျှကိုလည်း အမြဲတမ်း သဘောတူပေးလိမ့်မယ်၊ မင်းအတွက် ကလေးတွေကိုလည်း မွေးပေးလိမ့်မယ်။ နောက်ပြီး ညတစ်ရေးနိုးမင်းကို နှိုးနှိုးပြီးတော့ အဲ့ဒီကလေးတွေကိုလည်း ထိန်းခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ မင်းကို အမြဲတမ်း ဟိုဟာပူဆာ ဒီဟာ ပူဆာလည်း လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဘယ်တော့မှလဲ မင်းကို စိတ်ကောက်မှာ မဟုတ်ဘူး။
Posted by Aung Htut at 9/17/2011 10:20:00 AM3comments
တစ်ခါတုန်းက လူရွယ်လေးတစ်ယောက်ဟာ လမ်းလျှောက်လာရင် ဆင်တင်းကုပ်နားကို ရောက်လာပါသတဲ့။ အဲ့ဒီမှာ ဆင်တွေရဲ့ ခြေထောက်မှာ ကြိုးသေးသေးလေးနဲ့ပဲ ချည်နှောင်ထားတာကို တွေ့ရပါသတဲ့။ သူငယ်လေးလည်း အံသြသွားပါတယ်။ ဒီလိုသေးငယ်တဲ့ ကြိုးကလေးတွေနဲ့ ချည်ထားရုံနဲ့ ဒီဆင်တွေကို ထိန်းနိုင်မှာတဲ့လား၊ အချိန်မရွေး ဒီကြိုးတွေကို ဖြတ်ပြီးတော့ သူတို့ သွားနိုင်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် ဆင်တွေကတော့ အဲ့ဒီလို ရုန်းဖို့ မကြိုးစားကြပါဘူး။
Posted by Aung Htut at 9/16/2011 01:21:00 PM4comments
Posted by Aung Htut at 9/15/2011 11:50:00 PM5comments
ကျွန်တော်တို့ဟာ လူရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် ဖြစ်တည်မှု့ ၃ ခုကို မလွဲမသွေ ကြုံတွေ့ရမှာပါ။ အာဖရိကကလူတွေဖြစ်ဖြစ် တရုတ်ကလူတွေဖြစ်ဖြစ် ကျွန်းပေါ်ကလူတွေဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီ ၃ မျိုးကို ပထမဆုံး တွေ့ကြုံကြရမှာပါ။ ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ သင်ကိုယ်တိုင်ပါဘဲ။ ဒါဟာ သင်အသက်ရှင်နေသရွှေ့ သင် နှင့် သင်ဟာ အမြဲတမ်းအတူတစ်ကွ ရှိနေမှာပါ။ သင်နှင့် အတူတကွ အလုပ်လုပ်ရမှာက သင်ကိုယ်တိုင်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်နှင့် အတူတစ်ကွ အကြိမ်အများဆုံး ထမင်းစားမယ့်လူ၊ သင်နှင့် အတူတကွအကြိမ်အများဆုံး အိပ်စက်မယ့်လူ၊ သင်နှင့်အတူတစ်ကွ ရေချိုးမယ့်လူ တစ်နေ့တာ သင်နှင့် အတူတစ်ကွ ရှိနေမယ့်လူဟာ သင်ကိုယ်တိုင်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ သင်နဲ့ သင်ကိုယ်တိုင်ဟာ သဟဇာတဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်။ သင့်ကိုယ်သင် ယုံကြည်နေဖို့လိုပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်ဟာ သင်ရဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်းဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်။ ဒုတိယ ဖြစ်တည်မှု့တစ်ခုကတော့ သင်ကိုယ်တိုင်ဟာ လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေခြင်းပါ။ ဒါကြောင့် သင်ဟာ အခြားသော လူတစ်ယောက်နဲ့ ဆက်ဆံရေး ရှိဖို့လိုပါတယ်။ တတိယ ဖြစ်တည်မှု့ကတော့ အစုအဖွဲ့ နှင့် အတူတစ်ကွ အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့၊ လူအများနှင့် အတူ မျှဝေခံစားတတ်ဖို့၊ အသင်းအဖွဲ့တွေနှင့်အတူ အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့၊ အဖွဲ့အစည်းအလိုက် အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ ဒါတွေ လိုအပ်ပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 9/15/2011 01:38:00 PM0comments
ခရစ်(စ်) ၀ယ်လ်တန် ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ သူမရဲ့ လက်သည်းတွေကို မညှပ်ဘဲ ထားခဲ့တာ ၁၈ နှစ်ရှိပြီလို့ဆိုပါတယ်။ အခုတော့ ဒီလိုမညှပ်ဘဲထားခဲ့တဲ့ အတွက် ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာ ဖော်ပြခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ လက်သည်းအရှည်ဆုံး အမျိုးသမီးအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ခံရမှာဖြစ်ပြီး နယူယော့ခ် မှာ သူမရဲ့ လက်သည်းတွေကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ဂင်းနစ် ကမ္ဘာ့ စံချိန်စာအုပ်ကို ဒီလကုန်ပိုင်းမှာ စတင်ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်ဘက်လက်စုစုပေါင်း လက်သည်းအရှည်ကတော့ ၁၀ ပေ ၂ လက်မ ဖြစ်ပြီး ညာဘက်လက်စုစုပေါင်း လက်သည်းအရှည်ကတော့ ၈ ပေ ၇ လက်မရှိပါသတဲ့။ သူမအဆိုအရကတော့ သူမရဲ့ လက်သည်းတွေကို အမြဲတမ်း အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ခြယ်သရပြီး ပျင်းရိငြီးငွေ့စရာကောင်းတဲ့ အိမ်အလုပ်တွေကိုလည်း ဒီလက်သည်းအရှည်လိမ်တွန့်တွန့်ကြီးတွေနဲ့ လုပ်ရပါတယ်တဲ့။
“ဒီလို သန့်ရှင်းရေးတွေလုပ်ရတာကို ကျွန်မအရမ်းမုန်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် လုပ်ရမှာဘဲလေ။ လက်သည်းအတွက်ကတော့ တော်တော်ကို ဂရုတစိုက် ပြုပြင်ပေးရပါတယ်” လို့ အဆိုပါ လက်သည်းပိုင်ရှင် ဆိုပါသတဲ့။ သူမဟာ သူမရဲ့ မိသားစု စားဝတ်နေရေုး အတွက် အဆိုတော့ ဘ၀နဲ့ အသက်မွေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အရင် စံချိန်တင်ထားတဲ့ ကမ္ဘာ့လက်သည်းအရှည်ဆုံး အမျိုးသမီးကတော့ Salt Lake City မှာ နေတဲ့ Lee Redmon ဆိုသူဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ သူမရဲ့ လက်သည်းအရှည်က ၂၈ ပေရှိပါသတဲ့။ ဒါပေမယ့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာတော့ ကားတိုက်မှု့ကြောင့် သူမရဲ့ လက်သည်းတွေ ကျိုးသွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သြော်…. ဘာမှ မစားရ မသောက်ရ ဘာမှ လုပ်လို့မရတဲ့ ဒီလက်သည်းရှည်တွေကို ဂင်းနစ် စာအုပ်ထဲ ပါဖို့များ ဒုက္ခခံပြီးတော့ အရှည်ထားသတဲ့ မမတို့ရယ်။ ဆင်းရဲခြင်းကို ဆင်းရဲခြင်းလို့ မမြင်တော့လဲ ဆင်းရဲ့ရခြင်းရဲ့ အကြောင့်တရားတွေကို မရှာချင်၊ ဆက်ပြီးတော့ မိုးခါးရေတွေ ချိုကြသေးတာပေါ့လေ။
Posted by Aung Htut at 9/15/2011 12:00:00 PM0comments
ဒီပုံလေးတွေက Marvel ရဲ့ နာမည်ကျော် စူပါဟီးရိုးများ အိုသွားတဲ့အချိန်ကို ကာတွန်းဆရာ Donald Soffritti က သရုပ်ဖော်ရေးဆွဲထားတာပါ။ ဒီပုံလေးတွေကို ကြည့်ပြီးတော့ သဘောကျတာနဲ့ ပိုစ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Superman တို့ နုစဉ်ကပုံ
Posted by Aung Htut at 9/14/2011 01:22:00 PM2comments
First customer in six years completes The Big One fry-up challenge
ဒါကတော့ ကော်ဘီမြို့ကလေးရဲ့ “Hungry Hossee Café” လို့အမည်ရတဲ့ ဆိုင်ကလေးရဲ့ စားသောက်စာရင် မီနူးမှာ ကြော်ငြာထားတဲ့ ကုန်အောင်စားနိုင်ရင် အလကားစားသွား၊ မကုန်ရင် ၁၂ ပေါင်ပေးဆိုတဲ့ “The Big One fry-up” လို့ခေါ်တဲ့ မနက်စာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်သက်တမ်း ၆ နှစ်အတွင်းမှာ “The Big One fry-up” ကို ဘယ်သူမှ ကုန်အောင်မဖြိုနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဆိုင်ကလေးရဲ့ နံရံတွေမှာ ၆နှစ်တာကာလအတွင်း စားခဲ့တဲ့ လူ ၆၀ ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ချိတ်ဆွဲထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် စတိဗ့် မက်ဂီ ဆိုတဲ့ အသက် ၂၉နှစ်အရွယ် လူငယ်တစ်ယောက်ကတော့ ဒီ ၆ နှစ်တာအတွင်းမှာရှိတဲ့ စံချိန်ကို ချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဒီ “The Big One fry-up” ကို ကုန်အောင်စားဖို့ ၁နာရီနဲ့ မိနစ် ၂၀ စားသောက်ခဲ့ရပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 9/14/2011 09:20:00 AM 1 comments
ဒီတစ်ခါတော့ Fly Geyser လို့ခေါ်တဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ နေရာလေးတစ်ခုအကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်။ Fly Geyser (ဖလိုင်းဂေးဆာ) ကို Fly Ranch Geyser လို့လဲ ခေါ်ကြပါတယ်။ ဒီနေရာလေးဟာ သဘာဝရဲ့ အံသြဖွယ်ကောင်းတဲ့ နေရာလေး တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာလေးဟာ နီဗားဒါးပြည်နယ် ရဲ့ Washoe County နားမှာရှိပါတယ်။ ဒီနေရာလေးကို အခုလောလောဆယ် Todd Jaksick (တော့ဒ် ဂျက်ဆစ်) လို့ ခေါ်တဲ့လူက ပိုင်ဆိုင်တာပါ။ ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့ မြေအောက်ကရေတွေဟာ သူ့ဟာသူ ပန်းထွက်လာတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တိုက်ဆိုင်မှု့တစ်ခုလို့ ပြောရမလိုပါဘဲ။
Posted by Aung Htut at 9/12/2011 11:52:00 PM0comments
Posted by Aung Htut at 9/08/2011 09:06:00 PM0comments
Posted by Aung Htut at 9/08/2011 11:51:00 AM 12 comments
Posted by Aung Htut at 9/07/2011 12:21:00 PM2comments
မီတာ ၂၀၀၀ကျော် အမြင့်ရှိမည့် လူအင်အားဖြင့် တည်ဆောက်မည့် တောင်
ဒီစိတ်ကူးက သတင်းစာက ဂျာနယ်လစ်တစ်ယောက် လျှာရိုးမရှိတိုင်း လျှောက်ပြောခဲ့တာက စတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ ဟော်လန်က ဗိသုကာတွေ၊ အင်ဂျင်နီယာတွေ၊ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ ရင်းနှီမြှပ်နှံသူတွေဟာ ဒီ မီတာ ၂၀၀၀ ကျော်မြင့်တဲ့ လူလုပ် တောင်ကြီးကို နယ်သာလန်နိုင်ငံမှာ တည်ဆောက်ဖို့ အလေးအနက်ထားပြီး စဉ်းစားလာကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 9/06/2011 12:27:00 PM2comments
First Hybrid Tug in Europe – Port of Rotterdam’s ‘RT Adriaan’
ဥရောပရဲ့ ပထမဆုံး “Hybrid Energy” သုံး Tug boat ကို ၂၀၁၁ မေလ ၁၇ ရက်နေ့ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ အန့်ဝပ်မှာ ကျင်းပတဲ့ နိုင်ငံတစ်ကာ တွန်း/ဆွဲ (Tug) များနှင့် သင်္ဘောဆယ်ယူရေး ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးမှာ ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ ကနေဒါအခြေစိုက် အင်ဂျင် တီထွင်တဲ့ ဒီဇိုင်နာများနှင့် Aspin, Kemp and Associates(AKA)လိုခေါ်တဲ့ တည်ဆောက်သူ၊ သင်္ဘောလိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ KOTUG တို့ ပူးပေါင်းဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဟော်လန်နိုင်ငံရဲ့ ရော်တာဒမ် ဆိပ်ကမ်းမှာ အလုပ်လုပ်မယ့် ဒီသင်္ဘော (RT Adriaan) ဟာ AKA’s ရဲ့ “XeroPoint Hybrid Propulsion System” ကို သုံးထားတာပါ။
Posted by Aung Htut at 9/05/2011 06:34:00 PM2comments
Posted by Aung Htut at 9/05/2011 12:35:00 PM0comments
လူနေသိပ်သည်းမှု့ထူထပ်တဲ့ မြို့ပြ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် စီမံခန့်ခွဲသူတွေရဲ့ ခေါင်းခဲစရာ ပြသနာကတော့ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း (Traffic) တွေနှင့်ပတ်သတ်ပြီးတော့ ဘယ်လို မြန်ဆန်လာအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ ပြသနာပါ။ သမရိုးကျ ဘက်စ်ကားတွေကို တိုးမြှင့်ပြီးပြေးဆွဲမယ်ဆိုရင်လဲ ဒါဟာ လမ်းတွေကို ပိုမိုပိတ်ဆို့စေပြီး အခြေအနေကို ပိုမိုဆိုးဝါးစေပါလိမ့်မယ်။ ဒါအပြင် လေထုညစ်ညမ်းမှု့တွေလည်း ပိုမိုပြီးဆိုးဝါးလာစေမှာပါ။ ဒါမှမဟုတ် မြေအောက်ရထား (Subway) တွေကို သုံးချင်ပါသလား။ ဒီနည်းလမ်းကတော့ ငွေကြေးအကုန်အကျ ပိုမိုများပြားစေပြီး တည်ဆောက်ရမည့် အချိန်ရှည်လျှားပါတယ်။ ဒီတော့ ပိုမိုပြီး ဈေးသက်သာတဲ့၊ ပိုမိုပြီး ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု့ကို လျှော့နည်းစေမည့် (Greener enviornemnt)၊ အစားထိုး တစ်ခုအနေနှင့် စဉ်းစားရမှာကတော့ “Straddling Bus” လို့ခေါ်တဲ့ ကားများ အောက်မှ သွားနိုင်တဲ့ ဘက်စ်ကား မျိုးဆက်သစ်ကို ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂါတ်မှာ ဒီဘက်စ်ကားကို ဘေဂျင်း မင်တောင်ဂူး နယ်မြေမှာ စတင်ပြေးဆွဲဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 9/03/2011 03:30:00 PM0comments
အခု သတင်းလေးကတော့ ဒီလိုပါ။ အမှု့က အိမ်လိုချင်တဲ့အတွက် ကူလီကူမာလုပ်ပြီး ကွာရှင်းပြတ်စဲတဲ့ မိန်းမပျိုလေးရဲ့ အမှု့ပါ။ ဒီအမှု့အတွက် တရုတ်ပြည်ရဲ့ အမြင့်ဆုံးသော တရားစီရင်မှု့လွှတ်တော်ရဲ့ အမိန့်ချမှတ်မှု့ကတော့ အိမ်ကို မူလပိုင်ရှင်(ခင်ပွန်း) သည်သာလျှင် ပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ပိုက်ဆံကို ကိုးကွယ်နေတဲ့ (worshiping money) ငယ်ရွယ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ဟန့်တားတဲ့ သဓကတစ်ခုပါတဲ့။
ဟူကျားချူး လို့ခေါ်တဲ့ ရှေ့နေကနေတော့ “ဒါဟာ လူငယ်လူရွယ်တွေ၊ အထူးသဖြင့် ငယ်ရွယ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေကို မိမိခြေထောက်အပေါ် မိမိ ရပ်တည်စေရန်နှင့် လက်ထပ်ခြင်းဆိုတာ ပိုက်ဆံကို လိုချင်လို့ လက်ထပ်တာမဟုတ်ဘဲ မှန်ကန်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးမျိုးအတွက်သာ ဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ အသိတရား ၀င်လာအောင် လမ်းပြပေးတာလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” လို့ ဗြိတိန်နိုင်ငံက နေ့စဉ် သတင်းစာ (Daily Telegraph) ကို ပြောပြသွားပါတယ်။
ဘေကျင်းအခြေစိုက် အောင်သွယ်တော် အကျိုးဆောင် လုပ်ငန်းရဲ့ အကြံပေး ၀မ်ကျီဂို ဆိုသူကတော့ အခုလောလောဆယ် နှစ်တွေမှာ ငယ်ရွယ်တဲ့မိန်းကလေးတွေဟာ အချစ်ဆိုတာထက် ငွေကို ပိုမိုပြီးတော့ တန်ဖိုးထားလာတာကို တွေ့ရပါတယ်တဲ့။
Posted by Aung Htut at 9/03/2011 10:30:00 AM3comments
၂၀၁၁ နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်နေ့မှာ Facebook တစ်ကယ်ဘဲ ဆုံးခန်းတိုင်မှာလား?
ခုတစ်လော အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ YouTube ပေါ်မှာ ပျံနှံနေတာကတော့ Anonymous (အမည်မသိ) လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ ဟက်ကာ တစ်စုဟာ Facebook ကို ၂၀၁၁ နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်နေ့မှာ တိုက်ခိုက်မယ်လို့ ကြော်ငြာထားတဲ့ အပေါ်မှာပါ။
YouTube ပေါ်မှာတော့ ဒီ ဟက်ကာတွေ ကြော်ငြာထားတာကတော့ လူတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်တွေ လုံခြုံမှု့ရှိစေရန်အတွက် ဖေ့စ်ဘုတ်ကို “Kill” သတ်ဖို့ ပါဝင်ကူညီကြပါတဲ့။ Anonymous ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ရောက်က AFP သတင်းဋ္ဌာနကိုပြောသွားရာမှာတော့ လောလောဆယ်အထိကတော့ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ကိုက ဘယ်လောက်အထိ ပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတာကတော့ မသေချာသေးပါဘူးတဲ့။
Posted by Aung Htut at 9/02/2011 11:15:00 PM3comments
အပျိုစင်လေးများကို အခမဲ့ ၀င်ခွင့်ပေးမည့် တရုတ်က အပန်းဖြေဥယျာဉ်
တရုတ်ပြည်၊ ဟူနန် ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ အပန်းဖြေဥယျာဉ်တစ်ခုကတော့ အသက် ၂၂ နှစ်နှင့် အထက် ယင်ဖိုတောင်မသန်းဖူးသေးတဲ့ အပျိုစင်လေးများကို အခမဲ့ဝင်ခွင့်နှင့်အတူ ဆုတွေပါပေးနေပါပြီတဲ့ဗျား။ ဒါဟာ တစ်ပြည်လုံးကို ဖြန့်ချီနေတဲ့ ဂလိုဗယ် တိုမ်း(စ်) လို့ခေါ်တဲ့ တရုတ်သတင်းစာက ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၈၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်ပိုင်းနောက်မှာ မွေးတဲ့ အပျိုစင်ကလေးများကို ဆိုလိုတာပါတဲ့။ ဒီ အပန်းဖြေဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာ စူးလောင် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာက ပြသထားတဲ့ ရေတံခွန်ရှု့ခင်းများ၊ ပန်းမျိုးစုံ တွေကို ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသတဲ့။ လက်ဖက်နဲ့ သံလွင် ခင်းများ စတဲ့ စတဲ့ သဘာဝရှု့ခင်းတွေကိုလည်း ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်တဲ့ဗျား။
Posted by Aung Htut at 9/01/2011 10:00:00 PM 1 comments
Posted by Aung Htut at 9/01/2011 09:45:00 PM0comments
ရွှေနှင့်ပြုလုပ်ထားသော စိန် ၁၈လုံး ပါသည့် လက်စွပ်တစ်ကွင်းရောင်းရန်ရှိသည်။ လက်စွပ်၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ စိန် ၃လုံးကို ၃တန်းစီ စီထားသည်။ စိန်သုံးလုံးမှာ အလည်တစ်လုံးက ခပ်ကြီးကြီး။ ၀တ်ပြီးသား၊ အသစ်အတိုင်းရှိသည်၊ ၉ ရက်သာဝတ်ရသေးသည်။ ဒါကိုဝယ်လိုက်ရင် အိမ်ကဟာမကြီး ပါးစပ်ပိတ်မလားလို့ဝယ်လိုက်မိတာ။ ဒါပေမယ့် ဒီလက်စွပ်က ဒီဟာမကြီးပါးစပ်ကို မပိတ်နိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် ပြန်ရောင်းဖို့စီစဉ်တာ။ ခေါ်ဈေးက ၈၀၀ ဒေါ်လာ။
လိုချင်ရင် ဒီဖုန်းနံပါတ်ကို ဆက်သွယ်ပါ - xxxxxxxxx မနက် ၉နာရီမှ ည ၉နာရီအထိသာ။
Posted by Aung Htut at 9/01/2011 01:52:00 PM2comments
ရှန်ဟိုင်းမှာ နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဖြစ်တဲ့ ရထားတိုက်မှု့...
Facebook (ဖေ့စ်ဘွတ်) က ပိုက်ဆံတွေကို စားပစ်နေတာလား...